I-China yehagu enkonkxiweyo yehagu enkonkxiweyo yokuGcinwa kwexesha elide Ukwenziwa kokutya kunye neFactory | HUIQUAN
1. Izithako: Inyama yehagu,Amanzi,Isosi yeSoy,Iswekile,Ityuwa,Ioli yemifuno esulungekisiweyo,Iziqholo.
Gcoba, ubilise, udle inyama eninzi
ISandwich Eyonqenayo: Sika ngokulula iham kunye nenyama yehagu enezithako ezintsha ezahlukeneyo ukonwabela isidlo esikhawulezayo semizuzu emi-5
Iqabane le-noodle elikhawulezayo: i-ham eqhotsiweyo kunye nehagu, etyebileyo ngamanqatha kwaye inevumba elimnandi, ikhrisimesi ngaphandle kwaye ithenda ngaphakathi, khanyisa ixesha lakho le-noodle langoko.
Iqabane lembiza eshushu: Imbiza eshushu yeShabu, imifuno ebsiweyo, inyama yehagu ebilisiweyo kunye nenyama yehagu zithambile kwaye zithambile, zifudumeza incasa yakho yasebusika.
Nokuba yi "sandwich" okanye "i-hamburger" yesidlo sakusasa, inyama yesidlo sasemini kunye ne-noodles ekhawulezileyo, okanye inyama yesidlo sasemini ephekwe ngembiza eshushu, imanzisa umlomo. Kwanesitya se-noodles esicacileyo, emva kokubeka izilayi ezi-2, ngoko nangoko yenza abantu banomdla wokutya! Ngayo, unokusombulula ngokulula ingxaki yokutya ekhaya nasemsebenzini.
Buza: Ngaba uyaqinisekisa ukuba ukuhanjiswa kwemveliso kukhuselekile kwaye kukhuselekile?
Impendulo:Ewe, sihlala sisebenzisa umgangatho ophezulu wokupakisha ngaphandle. Sikwasebenzisa ukupakishwa kweengozi ezikhethekileyo kwimpahla enobungozi kunye nabathumeli abaqinisekisiweyo abagcina izinto ezibandayo kwizinto ezinobushushu bobushushu. Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingekho mgangathweni zingafaka intlawulo eyongezelelweyo.
Ngaphambili: 340g enkonkxiweyo yehagu Isidlo sasemini Inyama
Okulandelayo: Inyama yehagu kunye neHam ilula kwaye isempilweni
Iinyama ezinkonkxiweyo zokusinda, Inkukhu enkonkxiweyo, Inyama yehagu enkonkxiweyo, Inyama yehagu yesidlo sasemini, Idada Eliqhotsiweyo elinkonkxiweyo, I-Canning Beef Brisket,